Waxaa jira wax badan oo dhibaato ah in aad la kulmi kartaa marka ay isku dayaan in ay xogta ka Blackberry wareejiyo telefoonka HTC. Haddii aadan si gaar ah ugu xeel dheer casriga ah, qorshaha heshiiska uu noqon karaa oo gebi ahaanba niyad iyo aad u adag in aad dhamayso. Qaar ka mid ah arrimaha ay u badan tahay in ay waayo-aragnimo aad waxaa ka mid ah;
• Geedi socodka waxaa laga yaabaa in aad u dheer
• Software aad doorato in aad isticmaasho waxaa laga yaabaa in aad u adag in la isticmaalo
• Habka aad isku daydo in ay isticmaalaan ayaa laga yaabaa inay aad u adag
• Waxaa laga yaabaa in aan helnay hab loo sameeyo.
Dhibaatooyinkaas ayaa tilmaamaya baahan yahay hab fudud si ay u gudbiyaan xogta ka Blackberry ah in aad telefoon HTC. Nasiib wanaag, waxa jira hab inay tan sameeyaan. Laakiin ka hor inta aan ka Blackberry wareejin karaan xogta si aad telefoon HTC, waxaan u baahanahay in dib-up xogta ku saabsan Blackberry.
Sida loo kaabta aad Blackberry Data
Si aad xog gurmad blackberry si guul ah, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo Blackberry Desktop Software ka dibna aad ayaa diyaar u ah inuu ku soo bilowdo.
Talaabada Koowaad: Burcad Manager Blackberry Desktop ka dibna xiriiriyaan phone in computer isticmaalaya fiilooyinka USB.
Tallaabada Labaad: Marka xiran waa in aad suuqa kala socda.
Riix kaabta iyo Soo Celinta iyo markaasi uu suuqa kala socda guji kaabta. Waa in ay eegaan wax sidan oo kale.
Dooro files ee aad jeclaan lahayd in ay dib-up ka dibna riix on HAA uu furmo suuqa sababtay. Waxa ay u muuqataa wax sidan oo kale.
Waa muhiim in aad sii telefoonka aad Blackberry ku xiran si aad u computer ilaa hannaanka dib-up la soo gabagabeeyo. Marka geeddi-socodka la soo gabagabeeyo, aad haddeer haysatidna doonaa nuqul ka mid ah xogta aad leedahay aad Blackberry on your computer.
Hadda waxaa la joogaa waqtigii si ay u gudbiyaan xogta in si aad telefoon HTC. Qalab ugu wanaagsan ee shaqada waa Wondershare MobileGo. Software kuu oggolaanayaa in aad si fudud u gudbiyaan xogta on your computer si aad telefoon HTC in mid ka mid click. Ma jiro technology si ay u bartaan iyo wax walba waxaa loo sameeyaa hab aan xuduud lahayn si loo hubiyo in aadan waqti kasta oo la hawl fudud. Bal aynu eegno sida ay u gudbiyaan xogta waxa kaliya oo aan xoojiyaa ka your computer qalab HTC aad.
Tallaabada Koowaad: Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo MobileGo Wondershare oo ku xidh in your computer. Markaas xiriiriyaan phone in your computer iyadoo la isticmaalayo qalab USB. Waa in aad suuqa kala sidaan oo kale ah.
Tallaabada Labaad: In daaqadan, guji Qalabka Super Tab iyo suuqa kala dhashay, guji soo celi. Suuqa ayaa waa in ay eegaan wax sidan oo kale.
Talaabada Sadexaad: Suuqa ayaa soo celiyo arbushin ilaa doona. Marka ay dhacdo, waxaad arki doontaa dhowr ah oo ku jira khaanadda saxda ah oo aad ka dooran kartaa file aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan in aad telefoon HTC. Xaaladdan oo kale waa file aan KMG-up on your computer ka qalab Blackberry aad.
Dhinaca geeska bidix ee hoose, guji celin iyo Wondershare MobileGo bilaabi doonaan in ay soo dhoofsadaan dhammaan xogta aad soo xushay in aad telefoon HTC. Hubi in aad telefoon dhaxyada ku xiran tahay arrimaha soo celinta.
Hambalyo aad leedahay si guul leh loo wareejiyay xogta laga telefoonka aad Blackberry in aad telefoon HTC. Eeg, waa in si sahlan oo aad ku socoto isticmaalka telefoonka aan mar kasta oo ay marayaan daraasiin Casharrada isku dayayaan in ay tiradaasi ka soo lumin.
Waa maxay nooca xogta dadka badankooduna waxay jecel yihiin si ay u gudbiyaan ka Blackberry in phone HTC oo kale?
Waxaa jira noocyo gaar ah oo xog ah in dadka intooda badan ay doonayaan inay ku wareejin ka mid phone mid kale oo intaa ka badan yihiin kuwa kale. Dabcan nooca xogta aad si buuxda u wareejiyo waxay ku xiran tahay waxa aad rabto iyo waxa aad samaynaysid la xogta aad. Taas oo uu sheegay weli waxaa jira noocyo gaar ah oo xogta in wareejiyo badan yihiin kuwa kale. Liiska xogta ugu wareejiyay si ka ee dadka soo socda waa.
Inta badan caadi ah, dadka doonaya in ay u gudbiyaan qayb gaar ah oo xogta ay ay telefoonka Samsung. Tani inta badan waxay dhacdaa marka qofka uu leeyahay labada telefoonada iyo doonayo inuu sii labada telefoonada laakiin waan jeclaan lahaa qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan labada taleefannadooda in ay la mid. Sidaas, waxa nooca ugu badan ee xogta in inta badan dadka doonaya in ay u gudbiyaan ka Blackberry ay telefoonka? Bal aynu eegno 5 sare.
Photos waa ay fog nooca ugu caansan ee xogta waa in laga soo wareejiyay Blackberry ah inay telefoonka HTC ah. Sababta tani waa quruxsan cad. Dadka intooda badan rabaan in ay sii haystaan ​​xasuus ay qabsadaan oo ay la camera iyo haddii ay dooneyso in ay la beddelo telefoonada ama isticmaal laba telefoonada, malaha ay sidoo kale doonayaan sawirada ee telefoonka kale. Waxa kale oo fikrad wanaagsan inaad wax ka badan hal nuqul ka mid ah sawirada aad galka ay dhacdo in aad iyaga laga badiyo waxaa laga yaabaa.
Xogta ugu caansan labaad laga soo wareejiyay mid phone in kale. Mar kale sabab u yahay mid fudud ilaa xad. Waxay qaadataa waqti badan si ay u abuuraan playlist ah oo aad u cad ma doonayaan in ay dhex maraan habka abuurista aad playlist ka xoq oo keliya, maxaa yeelay, aad iska bedeleysid telefoonada. Aad ayay u fududahay si ay u gudbiyaan xogta ay u phone cusub. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wax ka badan hal nuqul oo Music files si aanay u lumin oo dhan music aad leedahay.
Waxaa kale oo aan caadi ahayn in la helo dadka doonaya in ay u gudbiyaan xiriirada ay ka mid phone in kale. Tan waxaa badanaa laga sameeyaa marka uu qofku doonayo inuu ku soo bilowdo oo isticmaalaya telefoonka cusub, haddii ay taasi ku phone HTC ah oo ay u doonayaan in ay lumiyaan oo dhan xiriirada waxay phone Blackberry. Xiriirada beddelashada sidoo kale waxay dhici kartaa marka qof uu doonayo inuu ku soo bilowdo oo isticmaalaya laba taleefan oo jeclaan lahaa inuu u dhaqaaqo qaar ka mid ah xiriirada ka mid phone in kale.
Mararka qaarkood rabnaa in aad fariimaha ku wareejin ka mid phone in kale. Sababtu waxa laga yaabaa wareejinaya maxaa yeelay, waxaad u wareegeen telefoonada iyo aadan dooneynin inuu waayo mid ka mid ah fariimaha aad. Ma aha kala iibsiga aad caadi xogta marka la barbar dhigo saddexda kale inkasta oo aan caadi ahayn si aad u ogaato dadka fariimaha ay wareejinta.
Marar kale, dadka isticmaala mobile dhammaan xogta ay wareejiyo hal. Foomkan of iibsiga Xitaa waa wax caam badan fariimaha iyo xiriirada wareejinta. Wax kasta oo aad rabto in aad wareejiso, aad haddeer haysatidna qaab fudud oo ay u guuraan xogta ka Blackberry in aad telefoon HTC.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Your Blackberry in phone HTC ah